TWITTER ကိုတိုက်ရိုက်အားလုံး TWEETS ပယ်ဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို - တွစ်တာ - 2019
ခေတ်သစ်မှတ်စုစာအုပ်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းပိုမိုပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးဖြစ်လာ, CD / DVD ကို drive ကိုဖယ်ရှားပစ်ရ။ တစ်ဦး flash drive ကိုကနေ OS ကို install လုပ်နိုင်စွမ်း - တစ်ချိန်တည်းမှာအသုံးပြုသူများအသစ်တခုလိုအပ်ရှိသည်။ သို့သော်တောင် bootable USB drive ကိုအတူအားလုံးမဟုတ်အဖြစ်ချောချောမွေ့မွေ့ကျနော်တို့လိုချင်ပါတယ်အဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Microsoft ကအမြဲယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပဟေဠိ pop ကိုချစ်တော်မူ။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ -, BIOS ရိုးရိုးယာဉ်ကိုမမွငျနိုငျသညျ။ အဆိုပါပြဿနာကိုယခုကြှနျုပျတို့ကိုဖော်ပြရန်ရာအများအပြားအဆက်ဆက်လုပ်ရပ်များအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
BIOS ကိုက boot flash ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး: Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုအောင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ထက်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် OS ကို install လုပ် သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကိုမျှလည်းမရှိ။ အထဲတွင်သင်က 100% သေချာစေပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသူ့ဟာသူမှားယွင်းစွာလုပ်ကြောင်းထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့ကို Windows ၏လူကြိုက်အများဆုံးဗားရှင်းကဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့နညျးလမျးတခြို့ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင်သင် BIOS ကိုအတွက်မှန်ကန်သော setting များကိုသတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ drive ကိုစာရင်းထဲတွင် drive ကို၏မရှိခြင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ချောင်းကို၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူစာချုပ်အပြီး, ကျနော်တို့ BIOS ကို၏အသုံးအများဆုံးဗားရှင်းကို configure သုံးနညျးလမျးမြားကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Window7installer ကိုအတူက USB flash drive ကို
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့က Windows ကို USB / DVD ကိုဒေါင်းလုပ် Tool ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး Microsoft က website ကိုသွားပါနှင့် bootable flash drive ကိုဖန်တီးရန်ရှိနေတဲ့ utility ကို download လုပ်ပါ။
က Install လုပ်ပြီးကဒ်ပြားအောင်ကိုစတင်ပါ။
button ကိုအသုံးပြုခြင်း "Browse"ဘယ်ဟာသည် Explorer ကိုဖွင့်လှစ်သည့် OS ကို၏က ISO-image ကိုပါဝင်သောတည်နေရာကိုရွေးပါလိမ့်မယ်။ အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို" နောက်ခြေလှမ်းသွားရောက်လည်ပတ်မည်။
installation ကိုမီဒီယာအမျိုးအစားများ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူ window ထဲတွင်ရိုက်ထည့်ပါ "ကို USB device ကို".
တစ်ဦး flash drive ကိုမှလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို Check နှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် run "ကူးယူ Begin".
ပုံမှန်အတိုင်းလမ်းအတွက်ပြတင်းပေါက်ပိတ်ပြီးအသစ်ဖန်တီးမီဒီယာနှင့်အတူစနစ်၏ installation ကိုစတင်ပါ။
တစ်ဦး bootable drive ကိုကြိုးစားပါ။
ဤနည်းလမ်းကို windose7နှင့်အထက်သင့်လျော်သည်။ အခြားစနစ်များမှပုံရိပ်များမှတ်တမ်းတင်ဖို့တစ် bootable flash drive ကိုဖန်တီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်ခန်းစာ: တစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အောက်ပါညွှန်ကြားချက်၌, သင်က Windows နှင့်အခြား operating system မြားအားဖြင့်ထိုအတူ drive ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ, ဒါပေမယ့်မရဘူး။
သင်ခန်းစာ: Ubuntu ကိုအတူ bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
သင်ခန်းစာ: DOS ကိုအတူ bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
သင်ခန်းစာ: အဆိုပါ Mac OS နဲ့အတူ bootable USB flash drive ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
Method ကို 2: ဆုချီးမြှင့် BIOS ကိုချိန်ညှိခြင်း
Boot တက်အချိန်ကာလအတွင်းဆုကို BIOS ကို, စာနယ်ဇင်း F8 ရိုက်ထည့်ပါရန်။ ဤသည်အသုံးအများဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ input ကိုအောက်ပါပေါင်းစပ်ရှိပါတယ်:
(Dell ကကွန်ပျူတာများကိုများအတွက်) reset;
ရဲ့စနစ်တကျ, BIOS ကို configure ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆုချီးမြှင့် BIOS ကိုလျှင်ဤသို့ပွု:
, BIOS သို့သွားပါ။
main menu ကိုမှ, အပိုင်းအတွက်ကီးဘုတ်ပေါ်မှာမြှားတို့ကို အသုံးပြု. သွားလာ "ပေါင်းစည်း Peripheral".
USB က controller စတဲ့အနေအထားရှိကြ၏ switches ကြောင်းစစ်ဆေးမှုများ "Enabled"လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပြောင်းပေးပါ။
အပိုင်းကိုသွားပါ "အဆင့်မြင့်" အဓိကစာမျက်နှာနှင့်စာစောင်ကိုမှ "Hard Disk ကို Boot ကိုဦးစားပေး"။ အောက်ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပုံရသည်။ ဝန်လေးသော "+" ကီးဘုတ်ပေါ်ထိပ်ရွှေ့ "ကို USB-HDD".
ပြတင်းပေါက်၏အဓိကအပိုင်းပြန် Switch "အဆင့်မြင့်" နှင့်သတ်မှတ်ထား "ပထမဦးစွာ Boot ကိုစက်ပစ္စည်း" အပေါ် "ကို USB-HDD".
နောက်ကျောကသင်၏ BIOS ကိုအတွက်အဓိကပြတင်းပေါက် settings ကိုသွားပါ, ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "F10"။ ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အတည်ပြုပါ "Y ကို" ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ။
အခုတော့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restart ပြီးနောက်ကို USB drive ကနေ install စတင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကွန်ပျူတာကို USB flash drive ကိုမမြင်ရပါဘူးအခါကိစ္စတွင်မှပဲ့ပြင်
Method ကို 3: AMI BIOS ကိုချိန်ညှိခြင်း
အဆိုပါဆုချီးမြှင့် BIOS ကိုများအတွက်ကဲ့သို့တူညီသောအဆိုပါ AMI BIOS ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ Key ကိုပေါင်းစပ်။
သငျသညျ AMI BIOS ကိုရှိပါကဤရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာ:
, BIOS သို့ သွား. , ကဏ္ဍရှာ "အဆင့်မြင့်".
ထိုသို့သွားပါ။ တစ်အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "ကို USB Configuration".
switches တွေ Set "ကို USB ရာထူးအမည်" နှင့် "ကို USB 2.0 Controller" အနေအထား "Enabled" ("Enabled").
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Loading" ("Boot ကို") ထိုအပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "Hard Disk Drive".
အမှတ်ရွှေ့ "Patriot ဒုံးမှတ်ဉာဏ်" အရပ်ဌာန ("1st Drive ကို").
အပိုင်းမှာတော့ "Boot ကို" သွားပါ "Boot ကို Device ကိုဦးစားပေး" နှင့်စစျဆေး - "1st Boot ကိုစက်ပစ္စည်း" ဒါဟာအတိအကျယခင်ခြေလှမ်းအတွက်ရရှိသောသောရလဒ်နှင့်အတူတက်ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးမှန်ကန်လျှင်, tab ကိုသွားပါ "Exit ကို"။ စာနယ်ဇင်းများ "F10" ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌ - key ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါကွန်ပျူတာသည်သင်၏ချောင်းကိုနှင့်အတူ စတင်. အသစ်တခု session ကို reset နှင့်စတင်ရန်သွားလိမ့်မည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အဆိုပါ flash drive ကိုတစ်ဦးက-Data ကို restore လုပ်နည်း
Method ကို 4: Configure UEFI
အဆိုပါ UEFI မှဝင်ပေါက်, BIOS ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အတိအကျတူညီသောလမ်းထွက်ယူသွားတတ်၏။
, BIOS ၏ဤအဆင့်မြင့် version ကိုသင် mouse ကိုသုံးနိုငျကတစ် graphical interface တစ်ခုနှင့်အလုပ်ရှိပါတယ်။ ဖြုတ်မီဒီယာကနေ Boot တက်ပါကထည့်သွင်းပေးရန်, အမည်ရရိုးရှင်းခြေလှမ်းများတစ်စီးရီးကိုလိုက်နာ:
အဓိကမျက်နှာပြင်တွင်ရုံအပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "Settings" ကို.
ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင် mouse ကိုသတ်မှတ်ထား "Boot ကို Option ကို # 1" သူကတစ်ဦး flash drive ကိုပြသနိုင်အောင်။
, ထွက် သွား. reboot နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး OS ကို install လုပ်ပါ။
အသစ်တစ်ခုကို operating system ကို install လုပ်သည့်အခါယခု BIOS ကို setting များကိုတစ်ဦး bootable USB flash drive ကိုနှင့်အသိပညာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူလက်နက်ပါ, သင်မလိုအပ်သောနှောင့်အယှက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: flash drive ကို Transcend recover6သက်သေပြနည်းလမ်းများ